China mukwende webhu Vagadziri, Yakasarudzika Mikwende webbing Quotation - Angel Garment Accessories Co., Ltd.
Imba >Zvigadzirwa >Webbing>Mikwende webhu
Iyo patani dhizaini yakanyanya kuomarara uye kuoneka kwepateni kana runyorwa ribhoni yeiyo jacquard ribhoni.
Cotton bhandi zvinoreva iyo jira rakarukwa nekotoni shinda kana donje nekotoni kemikari fiber yakasanganiswa yarn.Pure donje bhandi nechena yekotoni shinda yakarukwa, donje bhandi akasiyana, akasiyana mavara.Iyo inogona kuganhurirwa kuita yepuruvara bhandi donje bhandi, kudhaya donje bhandi, yakadhindwa donje bhandi, shinda-yakashongedzwa donje bhandi; Inogona zvakare kukamurwa kuita yakajeka donje bhandi,
Nylon padivi tambo inonyanyo shandiswa yemukati kumucheto kuputira. Rutivi tambo rinoshandiswa zvakanyanya kumucheto kuputira uye kushongedza kwezvakanaka zvigadzirwa zveganda, masutukesi emhando yepamusoro uye mabhegi, mabhegi ekurara, matende uye zvipfeko. Iyo zvakare inoshandiswa zvakanyanya kune zvinoshanda zvinangwa senge bhatani reshangu dzemitambo uye kusimbisa.Polyester bhegi rine nyoro mupendero, yakanyanya kushandiswa kune yakapfava jira kumucheto.